» के ३ जना तामाङ प्रतिस्पर्धी मध्ये एक जना बन्लान् हेटौँडा आईडल ?
के ३ जना तामाङ प्रतिस्पर्धी मध्ये एक जना बन्लान् हेटौँडा आईडल ?
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०९:२६
हेटौँडा, २८ फागुन । मकवानपुरको हेटौँडामा आयोजना गरिएको ‘राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाका अवसरमा आयोजित ‘ जिपिएक्स हेटौँडा आईडल’ गायन प्रतियोगिताको नतिजा आज सार्वजनिक हुँदैछ । मंगलबार भएको फाईनल भिडन्तमा भिडेका ५ प्रतिस्पर्धीमध्ये ३ जना तामाङ समुदायबाट भिडेका हुन् ।
मेलास्थलमा आज साँस्कृतिक कार्यक्रम पश्चात हेटौँडा आईडल घोषणा हुने बताइएको छ । फाईनलमा तामाङ समुदायबाट विजय लामा, सुशल तामाङ र भुवन घलान रहेका छन् । विभिन्न राउण्डमा सिंगर अफ द डे समेत हुन सफल सुशल तामाङ उपाधीका दाबेदार हुन् । मकवानपुरको उत्तरी भेगमा भएको विभिन्न प्रतियोगितामा समेत फाईनलमा पुगेका तामाङले उपाधी चुम्ने हकदारका रुपमा आफुलाई स्टेजमा प्रस्तुत समेत गरेका छन् ।
त्यस्तै विजय लामाले पनि आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिएका छन् । लामाले स्टेज प्रस्तुति दमदार दिएर निर्णायक र दर्शकलाई आफुतिर सोझ्याउन बाध्य पारेका छन् । यता पहिलो पटक गायन प्रतियोगितामा भाग लिँदै हेटौँडा आईडलको स्टेज उक्लिएका भुवन घलान पनि कम छैनन् । प्रतियोगिताको फाईनलमा पुगेका अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा गायन प्रतियोगितामा धेरै कम अनुभव सँगालेका उनले हेटौँडा आईडलको फाईनलमा पुगेर सबैलाई चकित समेत पारिदिएका छन् । सञ्चारकर्मी समेत रहेका उनको सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएका कारण उनलाई नै हेटौँडा आईडल भएको देख्न चाहाने पनि प्रशस्तै छन् । साथै उनी आईडलमा दर्शकका माझबाट सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धी पनि हुन् ।
फाईनलमा पुगेका ५ जना प्रतियोगीहरु निकै चर्चामा छन् । यस्तो अवस्थामा दर्शकको भोट र निर्णायकको मतले को विजेता बनाउँछ भन्ने सहजै अनुमान लाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसका लागि भने रिजल्टलाई कुर्नैपर्ने हुन्छ । आज बुधबार त्यसको छिनोफानो हुँदैछ । प्रतियोगितामा गायक संगीतकार शिखर सन्तोष, किशोर डंगोल र विजय कार्की निर्णायकको भूमिका निभाएका थिए । हेटौँडा आईडललाई जिपिएक्स रेसिङले प्रायोजन गरेको हो । आईडलमा प्रथम हुनेले नगद ३५ हजार सहित ५ हजार बराबरको चन्द्रागिरी केबलकार टिकेट, द्वित्तिय हुनेले नगद २५ हजारसहित ५ हजार बराबरको चन्द्रागिरी केबलकार टिकेट र तृतिय हुनेले नगद १५ हजार सहित ५ हजार बराबरको चन्द्रागिरी केबलकार टिकेट प्राप्त गर्ने छन् । प्रथम हुनेलाई मेलामा राखेका स्टलवालाहरुबाट पनि जिन्सी सामान पुरस्कारहरु रहेका छन् । आईडललाई वोन ट्राभल्सको तर्फबाट युएई (दुबाई) आउने जाने टिकटको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।